प्रेम के हो ? कसरी अनुभव गर्ने ? कसरी बुझ्ने ? - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १९, २०७७ समय: १०:२५:१९
प्राचिन ग्रिक वासीले प्रेमलाई ७ शब्दमा परिभाषित गरेका छन्–
स्टोगे: प्राकृतिक स्नेह जुन प्रेम हामी आफ्नो परिवारलाई दिन्छौं ।
इरोज: यौन या कामुक इच्छा । यो सकारात्मक या नकारात्मक पनि हुन सक्छ ।
अगप: विना शर्तको स्वाभाविक प्रेम
ल्युडस: क्रिडात्मक प्रेम, बच्चाको प्रेम, छेडखानी या फ्लर्टिङ
प्राग्मा: दिर्घकालीन प्रेम, जुन विवाहित जोडीमा हुन्छ ।
फिलिया: मानसिक प्रेम
फिलौटिया: स्वयंमा प्रेम
हामी जुन कुरा अनुभव गर्छौ, त्यसलाई हाम्रोे मस्तिष्कको दायाँ भागले नियन्त्रण गर्छ भने हाम्रो भाषालाई मस्तिष्कको बायाँ भाग कन्ट्रोल गर्छ । यदि हामी धेरै पटक र भिन्न परिस्थितिमा भनिरहन्छौं कि म तिमीलाई माया गर्छु । यसले प्रेम कमजोर पारिदिन्छ । जस्तैः हामी दिनभरिमा एउटै कुरा भन्न सक्छौं । आई लभ म्युजिक, आई लभ आइसक्रिम, आई लभ क्रिकेट, आई लभ यु जस्ता शब्द प्रयोग गर्छौ । वास्तकितामा यो प्रेमको भावना शायद नै हुन्छ ।
एक वैज्ञानिकको अनुसार:
प्रेम एक केमेस्ट्री हो । जैविक रुपमा यो एक न्युरोलोजिकल स्थिति हो । जस्तै, भोक या प्यास । तर, यसलाई हामी धेरै समयसम्म अनुभव गर्न सक्छौं । धेरैजसोले भन्ने गर्छन, प्रेम अन्धो हुन्छ । किनभने यसमा हाम्रो कन्ट्रोल हुँदैन् ।
प्रेम अस्थाई यौनइच्छा हो, जसमा केहि रसायन टेस्टोस्टेरोन र ओस्ट्रोजन हुन्छ । सच्चा प्रेममा मस्तिष्कबाट अन्य रसायनको मिश्रण फेरोमोस, डोपामाइन, नोरएपिनफ्राइन, सेरोटोरिन, अक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन निस्कन्छ ।
एक दार्शनिकका अनुसारः
प्रेम एक भावुक प्रतिबद्धता हो । यो कुनै व्यक्ति, समाज, देश या प्रकिृतिसँग हुन सक्छ ।
एक उपन्यासकारका अनुसारः
प्रेमबाट ठुल्ठुला उपन्यास र कथाको जन्म लिन्छ । प्रेम यहि कुरामा निर्भर रहन्छ कि तपाई कोसँग कुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ र कति सुरक्षित हुनुहुन्छ । तपाईलाई त्यति नै जरुरी लाग्छ, जसरी साँस फेर्नको लागि हावाको आवश्यकता हुन्छ । यसलाई गुमाउँदा तपाईलाई शारिरक र मानसिक पिडा हुन्छ ।
एक भिक्षुका अनुसारः
प्रेमलाई परिभाषित गर्नुभन्दा सजिलो यसलाई अनुभव गर्नुहुन्छ । हामी सबै आफन्त र कुनै पनि चिजभन्दा बढि प्रकृतिसँग प्रेम गर्छौ । प्रेम त्यो हो, जसले कसैलाई कष्ट पुर्‍याउँदैन् । बरु, हामीले यसको लागि मुल्य चुकाउनुपर्छ ।
एक मनेवैज्ञानिकका अनुसारः
प्रेम एक प्राकिृतिक शक्ति हो । त्यसमा हाम्रो धेरै कन्ट्रोल हुँदैन् । जस्तो मौसम, चन्द्रमा या सौर्यमण्डल । जसमा हाम्रो कन्ट्रोल हुँदैन् । केहि व्यक्तिका अनुसार प्रेम दुई व्यक्तिकोबीच एक असाधारण सम्बन्ध हो जुन परस्पर विश्वास, सम्मान र स्नेहसँग जोडिएको हुन्छ । र जति गहिरो हुन्छ त्यतिनै प्रेम गहिरो हुन्छ ।
किंग सोलेमनको भनाईः
जुन तरिकाले तपाईले पानीमा आफ्नो प्रतिबिम्व देख्नुहुन्छ । पुरुषको मन पनि त्यस्तै हुन्छ । तपाइलाई कसले प्रेम गर्छ भने तपाईको मनमा उसको प्रेमको महसुस गर्छ ।
लगातार समय सान्दर्भिक गीत निकाल्दै आएका सर्जक माधव न्यौपानेले पनि तीज गीत बजारमा ल्याएका छन् । अस्ट्रेलिया रहेका माधव न्...
छोरी हुर्किइन्। एउटा वर खोज्ने भइन्। गोप्य राखे पनि वर पाएकीमात्र छैनन्, प्रेमको उत्कर्ष छ। प्रसंग हो, पूर्वयुवराज पारस ...
कार्यालयमै बसेर विद्यालयहरूको अनुगमन
इटहरी । सुनसरीको इटहरी क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरुको अनुगमन उपमहानगरपालिकाबाटै सुरु गरिएको छ । नगर क्षेत्रमा सञ्चालि...
अमेरिकाले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदै
अमेरिकाले पनि चिनियाँ एप्लिकेसन टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको छ। हालै चिनियाँ एप्लिकेसनबाट सुरक्षा खतरा बढेको ...
दुर्घटनामा कलाकार चौधरीसहित दुईजनाको निधन
राष्ट्रिय नाचघर जमलमा कार्यरत दाङ लमही नगरपालिका ६ का कलाकार (नृत्य निर्देशक) गोरन चौधरीको निधन भएको छ । उनी शुक्रबार रा...